Firo Setịpụ Ọkụ Esi Ere - Imewe Mmewe
Setịpụ Ọkụ Esi Ere
Setịpụ Ọkụ Esi Ere FIRO bu ihe eji esi nri nke meghariri 5kg ma nwee obere oku obula. Mmanụ a na-ejide ite 4, jikọtara ya na mbugharị ụgbọ okporo ígwè na-enyere ya aka ịkwado ọkwa nri. N'ụzọ dị otu a, enwere ike isi n'ụzọ dị mfe na nchekwa dị mma dị ka drọwa drawer na-enweghị na-awụpụ nri, ebe a na-etinye ọkụ na ọkara n'ime ọkụ. A na-eji ite ahụ esi arụ nri na ebumnuche iri nri ma ejiri ya na-ejikwa ya na ngwa a na-eji ya na obere akpa mgbe a na-ekpo ọkụ. O bukwara blanket nke bu akpa na - ejide ihe bara uru.
Aha oru ngo : Firo, Aha ndị na-emepụta ya : Andrea Sosinski, Aha onye ahịa : NIMTSCHKE DESIGN - Andrea Sosinski.
Setịpụ Ọkụ Esi Ere Andrea Sosinski Firo